လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း | Linux မှ
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအသုံးပြုသူများနှင့် developer များနှင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံသူများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် အောက်ပါသည်ဤအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဓိကအဖွဲ့အစည်းများ၏ (မပြည့်စုံသော) စာရင်းဖြစ်သည်။
1.3 Vía Libre ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
1.9 Python အာဂျင်တီးနား (PyAr)
2.1 စပိန်နိုင်ငံ GNU
2.4 Ubuntu စပိန်နိုင်ငံ
2.5 Linux သုံးစွဲသူအုပ်စုများ (စပိန်)
3.1 မက္ကဆီကို GNU
3.2 Mozilla မက္ကဆီကို
3.3 Ubuntu မက္ကဆီကို
3.4 Linux အသုံးပြုသူအုပ်စုများ - မက္ကဆီကို
5.1 ပါရာဂွေး Linux အသုံးပြုသူအုပ်စု
6.1 Ubuntu ဥရုဂွေး
6.2 Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု - ဥရုဂွေး
7.1 Ubuntu ပီရူး
7.2 ပီရူး Linux အသုံးပြုသူများသည်အုပ်စု
8.1 ချီလီ GNU
8.2 Ubuntu ချီလီ
8.3 Mozilla ချီလီ
8.4 Linux အသုံးပြုသူအုပ်စုများ - ချီလီ
10.1 Ubuntu အီကွေဒေါ
10.2 Linux အသုံးပြုသူအုပ်စု - အီကွေဒေါ
11.2 Ubuntu ဗင်နီဇွဲလား
12.2 Linux အသုံးပြုသူအုပ်စုများ - Central America ဖြစ်သည်
13.2 IFC က
USLA သည်အာဂျင်တီးနားအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်သုံးစွဲသူများကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်အာဂျင်တီးနားရှိအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအဖွဲ့အစည်းအားလုံး၏ "မိခင်" ဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသုံးပြုသူအုပ်စုများနှင့်မတူညီသောအဖွဲ့အစည်းများကိုစုစည်းပေးသည်၊ ၎င်းတို့တွင်အောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ကဖေးCapital Federal ၏ Linux သုံးစွဲသူများ။
အပြင်းစား: Cordoba Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု။
Linux Santa Fe: Santa Fe မှ Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု။
LUGNA: Neuquénရှိ Linux သုံးစွဲသူများ။
gulBAC: Bs ၏ Prov ။ Of ၏စင်တာမှ Linux ကိုအသုံးပြုသူများသည်အုပ်စု။ As ။
Gugler: Entre Ríosအသုံးပြုသူအုပ်စု။
LUGMen: Mendoza အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအသုံးပြုသူအုပ်စု။
LANUX: Lanús Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု။
SOLAR အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အာဂျင်တီးနားမြို့ပြအသင်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်အာဂျင်တီးနားရှိအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဝင်များမှတည်ထောင်ခဲ့သည် ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်လွတ်လပ်သောယဉ်ကျေးမှု၏နည်းပညာ၊ လူမှုရေး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအားသာချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်၊ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းနှင့်စီမံကိန်းများ၏ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်အော်ဂဲနစ်နေရာတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာအခမဲ့လူမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
SoLAr သည်အမျိုးသားပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော INADI (ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆန့်ကျင်ရေးအင်စတီကျု၊ လူမှုဆန့်ကျင်ရေးနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု)၊ INTI (စက်မှုနည်းပညာနည်းပညာအမျိုးသားအင်စတီကျု)၊ ASLE (ပြည်နယ်ရှိအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နယ်ပယ်)၊ မြူနီစီပယ်နှင့်တက္ကသိုလ်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည် အာဂျင်တီးနားမှ။
Vía Libre ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
FundaciónVía Libre သည်အာဂျင်တီးနား၊ ကာဒိုဘာမြို့တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအကျိုးအမြတ်မယူသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏စံနမူနာများကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်ကာအသိပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုလွတ်လပ်စွာဖြန့်ဖြူးပေးသည်။ ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများအနက်နိုင်ငံရေး, စီးပွားရေး, ပညာရေးနှင့်လူမှုရေးနယ်ပယ်များတွင်အခမဲ့ software ကိုဖြန့်ဝေသည်။ ယင်း၏အဓိကလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတစ်ခုမှာစာနယ်ဇင်းနှင့်ဆက်ဆံရေး (၁) နှင့်ပြitနာများအတွက်အသိပညာပေးပစ္စည်းများဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အာဂျင်တီးနားလွတ်လပ်သောဆော့ဝဲလ်ကုမ္ပဏီများအသင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်ပြီး CAdESoL ၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်လွတ်လပ်သောဆော့ဝဲလ်စီးပွားရေးပုံစံအတွက်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည့်ကုမ္ပဏီအုပ်စုများ (သီးခြားလွတ်လပ်သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ - အထူးသဖြင့် - အထူးသဖြင့်လွတ်လပ်သောပညာရှင်များ - သည် CAdESoL ပြဌာန်းချက်တွင်မပါ ၀ င်ပါ) ။ ပူးပေါင်းရန်ကုမ္ပဏီသည်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုရမည်။
Gleducar သည်အခမဲ့ပညာရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်အာဂျင်တီးနားတွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပညာရေးနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင်လှုပ်ရှားသောအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Gleducar သည်လွတ်လပ်သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်ပညာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖြင့်စုပေါင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အသိပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြန့်ဝေခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
စီမံကိန်းသည်အခမဲ့ဗဟုသုတ၊ လူကြိုက်များသောပညာရေး၊ အလျားလိုက်ပညာရေး၊ ပူးပေါင်းလေ့လာခြင်း၊ အခမဲ့သောနည်းပညာအသစ်များကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနှင့်ကျောင်းများတွင်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲများကိုသင်ကြားရေးနှင့်နည်းပညာပုံစံအနေဖြင့်မြှင့်တင်ပေးသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲခြင်း။
၎င်းသည်ရပ်ရွာ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုတုန့်ပြန်သောအန်ဂျီအို (လူထုအခြေပြုအဖွဲ့) အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသောကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းထားသောပညာရေးအသိုက်အဝန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
BAL ဟုလည်းလူသိများသော BuenosAiresLibre သည် Buenos Aires (အာဂျင်တီးနား) နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကြိုးမဲ့နည်းပညာ (802.11b / g) တွင်လူထုအခြေပြုဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတွင်မြန်နှုန်းမြင့်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်သွယ်ပေးသောဆုံမှတ် ၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။
BuenosAiresLibre ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဒေတာကွန်ယက်ကိုလွတ်လပ်စွာစုစည်းရန်၊ Buenos Aires မြို့နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ရှိအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု၏သဘောသဘာဝအရအခြားအပလီကေးရှင်းများအနေဖြင့်ပါဝင်သည့်အရာများကိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ အခြားအကြောင်းအရာများအရကွန်ယက်တွင်ဝီကီပီးဒီးယားကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။ ကွန်ရက်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများဖြင့်အကူအညီပေးသည်၊ ၎င်းတွင်အင်တင်နာများကိုအိမ်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့်မည်သို့စုစည်းရမည်ကိုသင်ကြားပေးသည်။ BuenosAiresLibre သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲပရိုဂရမ်များကို သုံး၍ ဤကွန်ယက်ကိုတီထွင်သည်
1st အပေါ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ၊ Wikimedia Argentina သည် Wikimedia Foundation ၏ဒေသဆိုင်ရာအခန်းဖြစ်သည်။ သူသည်အခမဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရင်းအမြစ်များကိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတို့တွင်လုပ်ဆောင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဝီကီမီဒီယာ၊ ဝီကီမီဒီယာ၊ ဝီကီမီဒီယာ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Buenos Aires ရှိWikimanía 2007 ကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
Mozilla Argentina သည်အာဂျင်တီးနားရှိ Mozilla Foundation စီမံကိန်းများဖြန့်ဝေရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအထူးသဖြင့် Mozilla ကထုတ်လုပ်တဲ့အခမဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုအဖွဲ့အစည်းကနေတဆင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့နဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာပါ ၀ င်နိုင်ရေးကိုအထူးရည်ရွယ်ထားတယ်။
Python အာဂျင်တီးနား (PyAr)
Python Argentina သည်အာဂျင်တီးနားရှိ Python programming language ကိုမြှင့်တင်သူများနှင့် developer များအုပ်စုဖြစ်သည်။ သူ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာဆွေးနွေးမှုများနှင့်ညီလာခံများမှတဆင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအပြင် Python com PyGame သို့မဟုတ် CDPedia၊ ဝီကီပီးဒီးယား၏စပိန်ဘာသာဖြင့် DVD ပေါ် အခြေခံ၍ စီမံကိန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
Uuntu-ar သည်အာဂျင်တီးနားအခြေစိုက် Ubuntu အသုံးပြုသူများအုပ်စုဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံဖလှယ်ခြင်းနှင့်ဤစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများမျှဝေခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလည်ပတ်မှုစနစ်တိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသူများအားလုံး၏အကြံဥာဏ်များကိုပါ ၀ င်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Ubuntu ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်သည်။ Ubuntu မှာစတင်ဖို့၊ ပြproblemsနာဖြေရှင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ထင်မြင်ချက်ဖလှယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုသူတို့ site မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ GNU စပိန်အသိုင်းအဝိုင်း။ ထိုတွင် GNU စီမံကိန်းနှင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ လိုင်စင်၊ ဘယ်မှာ GNU ဆော့ဖ်ဝဲ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အတွေးအခေါ်၊
အမျိုးသားအခမဲ့လွတ်လပ်သောဆော့ဝဲလ်ကုမ္ပဏီများအဖွဲ့ချုပ်၏အဖွဲ့ချုပ် ASOLIF (ဖက်ဒရယ်အခမဲ့ဆော့ဝဲအသင်းများ) သည်နည်းပညာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဈေးကွက်ရှိအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်မျိုးဆက်များနှင့် အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံကိုအမြတ်ထုတ်ရန်စီမံကိန်းများအပြင်စည်းစိမ်ဥစ္စာမျိုးဆက်သစ်များအားတာ ၀ န်ယူမှုဖြင့်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုဖွဲ့စည်းခြင်း။
၂၀၀၈ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ASOLIF သည်ဒေသဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ ၈ ခုတွင်ဖြန့်ချိသောကုမ္ပဏီ ၁၅၀ ကျော်ကိုစုစည်းပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်စပိန်နိုင်ငံရှိအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ငန်းကဏ္ leading ၏ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဖြစ်သည်။
CENATIC သည်အစိုးရပြည်သူ့ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်မှု၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန (တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဌာနနှင့်သတင်းအချက်အလက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် Red.es မှအများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း) မှလည်းကောင်း၊ Junta de Extremadura မှလည်းကောင်းရာထူးတိုးပေးသည်။ အာရာဂရီးယား၊ အာရာဂွန်၊ ကန်တာဘရီးယား၊ ကက်တလန်နီးယား၊ ဘာလာရီရစ်ကျွန်းများ၊ Basque နိုင်ငံနှင့် Xunta de Galicia တို့၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများနှင့်အတူဂေါပကအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ Atos Origin၊ Telefónicaနှင့် Gpex ကုမ္ပဏီများသည် CENATIC ဘုတ်အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။
CENATIC သည်စပိန်အစိုးရ၏တစ်ခုတည်းသောမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဖြစ်ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတွင် open source software ၏ဗဟုသုတနှင့်အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မက္ကစီကိုတွင်အခြေစိုက်သော Ubuntu အသုံးပြုသူများအုပ်စုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် debian GNU / Linux ကို အခြေခံ၍ ဤစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများဖလှယ်ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Linux သုံးစွဲသူအုပ်စုများ (စပိန်)
AsturLinux: Asturian Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု။
သြဂေး: Castilla y Leon အသုံးပြုသူအုပ်စု။
BULMA: Mallorca နှင့် Surroundings ၏ Linux သုံးစွဲသူများစတင်သည်။
မင်္ဂလာပါ: Galicia ၏ Linux Users Group ။
GPUL-CLUG ဖြစ်သည်: Linux သုံးစွဲသူများနှင့်ပရိုဂရမ်မာများအုပ်စု - Coruña Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု။
GUL (UCRM)မက်ဒရစ်၊ ကားလို့စ် ၃ တက္ကသိုလ်၏အသုံးပြုသူအုပ်စု။
GULIC: Canary Islands Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု။
ဟားဟားစပိန် Linux သုံးစွဲသူများအသင်း။
မင်္ဂလာပါ: Almeria Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု။
Lilo: Linuxeros Locos - Alcalá de Henares တက္ကသိုလ်။
VALUXဖြေ Valencian အသိုင်းအဝိုင်းမှ Linux သုံးစွဲသူများအသင်း။
အဆိုပါ GNU မက္ကစီကိုအသိုင်းအဝိုင်း။ ထိုတွင် GNU စီမံကိန်းနှင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ လိုင်စင်၊ ဘယ်မှာ GNU ဆော့ဖ်ဝဲ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အတွေးအခေါ်၊
Mozilla မက္ကဆီကိုသည်မက္ကဆီကိုရှိ Mozilla Foundation စီမံကိန်းများဖြန့်ဝေရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအထူးသဖြင့် Mozilla ကထုတ်လုပ်တဲ့အခမဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုအဖွဲ့အစည်းကနေတဆင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့နဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာပါ ၀ င်နိုင်ရေးကိုအထူးရည်ရွယ်ထားတယ်။
၎င်းသည်မက္ကဆီကိုအခြေစိုက် Ubuntu သုံးစွဲသူများ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်းနှင့်ဤလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများမျှဝေခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
Linux အသုံးပြုသူအုပ်စုများ - မက္ကဆီကို
Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု - Chihuaha (GLUCh)
Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု - Ensenada (ELUG)
၎င်းသည်တက္ကသိုလ်များ၊ စီးပွားရေးသမားများ၊ အစိုးရ၊ သုံးစွဲသူအုပ်စုများ၊ ဟက်ကာများ၊ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအားအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
ပါရာဂွေး Linux အသုံးပြုသူအုပ်စု
၎င်းတွင်ဖိုရမ်များ၊ စာပို့စာများ၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲထင်ဟပ်ချက်များ (.iso ဖြန့်ဝေမှုများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများ)၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းများကိုလက်ခံခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်зерကြည့်ခြင်းများ (tldp.org, lucas.es) နှင့်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးကစီစဉ်ဖွဲ့စည်းထားသော Linux InstallFests ကိုသြဒိနိတ်များရှိသည်။ ။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အသုံးပြုသူများမှပေးပို့သောစီမံကိန်းများနှင့်မှတ်တမ်းများအတွက်ဝီကီရှိသည်။
၎င်းသည်ဥရုဂွေးနိုင်ငံအခြေစိုက် Ubuntu အသုံးပြုသူများနှင့်အတွေ့အကြုံဖလှယ်ခြင်းနှင့် ၄ င်း operating system နှင့်ပတ်သတ်သောဗဟုသုတများကိုမျှဝေရန်ရည်ရွယ်သည်။
Linux သုံးစွဲသူအုပ်စု - ဥရုဂွေး
၎င်းသည်ဥရုဂွေးနိုင်ငံရှိကွန်ပျူတာများအတွက် GNU / Linux operating system ကိုအသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။ အဖွဲ့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ GNU / Linux နှင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အသုံးပြုမှုနှင့်စံနှုန်းများကိုဖြန့်ဖြူးရန်နှင့်နည်းပညာဗဟုသုတသာမက၊ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုထောက်ပံ့သောအတွေးအခေါ်နှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုဖလှယ်ရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့်တူသော။
၎င်းသည်ပီရူးအခြေစိုက် Ubuntu သုံးစွဲသူများ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်းနှင့်ဤ operating system နှင့် ပတ်သတ်၍ ဗဟုသုတများမျှဝေခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
ပီရူး Linux အသုံးပြုသူများသည်အုပ်စု
အဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ Linux operating system ကိုဖြန့်ဖြူးရန်၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်နှင့်သင်ကြားရန်အတွက်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အတွင်း OpenSource ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။
PLUG သည်စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်မရှိသော်လည်းပီရူးရှိ Linux အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ အုပ်စုအတွင်း၌ပါ ၀ င်မှုသည်အဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူပူးပေါင်းရန်ဆန္ဒရှိသောလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအတွက်ဖွင့်နိုင်သည်။
အဆိုပါ GNU ချီလီအသိုင်းအဝိုင်း။ ထိုတွင် GNU စီမံကိန်းနှင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ လိုင်စင်၊ ဘယ်မှာ GNU ဆော့ဖ်ဝဲ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အတွေးအခေါ်၊
၎င်းသည်ချီလီအခြေစိုက် Ubuntu သုံးစွဲသူများ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်းနှင့်ဤလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများမျှဝေခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
Mozilla မက္ကဆီကိုသည်ချီလီရှိ Mozilla Foundation စီမံကိန်းများဖြန့်ဝေရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအထူးသဖြင့် Mozilla ကထုတ်လုပ်တဲ့အခမဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုအဖွဲ့အစည်းကနေတဆင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့နဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာပါ ၀ င်နိုင်ရေးကိုအထူးရည်ရွယ်ထားတယ်။
Linux အသုံးပြုသူအုပ်စုများ - ချီလီ
UCENTUXMetropolitan Region၊ ဗဟိုတက္ကသိုလ် Linux Users Group ။
CDSLအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပျံ့နှံ့စင်တာ၊ Santiago ။
GULIX: IX ဒေသ၏ Linux Users Group ။
GNUAP: Arturo Prat တက္ကသိုလ်၊ Victoria၊ Linux အသုံးပြုသူများ။
GULIPMPuerto Montt မှ Linux အသုံးပြုသူများ၏အုပ်စု။
ဖြန့်ဝေခြင်း Debian ချီလီ, ချီလီ Arch.
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်: GNOME ချီလီ, KDE ချီလီ.
GUTL ဟုလူသိများသော Free Technologies Users Group (Cuba) သည် OpenSource ၏စိတ်အားထက်သန်သူများနှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျူးဘားရှိ Mozilla Community ။ ကျူးဘားရှိကွန်ပျူတာသိပ္ပံတက္ကသိုလ် ၀ င်များကတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဦး ဆောင်သည်။
၎င်းသည်အီကွေဒေါနိုင်ငံအခြေစိုက် Ubuntu သုံးစွဲသူများ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်းနှင့်ဤ operating system နှင့်ပတ်သတ်သောဗဟုသုတများမျှဝေခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
Linux အသုံးပြုသူအုပ်စု - အီကွေဒေါ
Portal သည် GNU / Linux နှင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အသုံးပြုမှုနှင့်စံနမူနာများကိုပြန့်ပွားစေရန်နှင့် GNU / Linux စနစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြန့်ဖြူးရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဗင်နီဇွဲလား၏ GNU သုံးစွဲသူများအဖွဲ့သည်ဗင်နီဇွဲလားရှိ GNU စီမံကိန်းနှင့် FSF (Free Software Foundation) ၏အတွေးအခေါ်နှင့်စံနမူနာကိုဝေငှခြင်းနှင့်ဟောပြောခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည့်အဖွဲ့သည်ပရိုဂရမ်များ၊ စာပေများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကို အခြေခံ၍ အခမဲ့။
၎င်းသည်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအခြေစိုက် Ubuntu အသုံးပြုသူများအုပ်စုဖြစ်ပြီး debian GNU / Linux ကို အခြေခံ၍ ဤစနစ်နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများဖလှယ်ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Venezuela Linux Users Group (VELUG) သည် GNU / Linux လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကိုရယူသုံးစွဲနိုင်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များသည်စာပို့စာရင်းတွင်များစွာသောပစ္စည်းများကိုထုတ်ပေးသည်။ VELUG တွင်ဖလှယ်သည့်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ၏ရလဒ်ဖြစ်သောနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုစာပို့စာရင်း၏သမိုင်းဝင်မော်ကွန်းတိုက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
လွတ်လပ်သောနည်းပညာများ၏တော်လှန်ရေးတပ် ဦး (FRTL) သည်လက်ဝဲလက်ဝဲယိမ်းအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရပ်ရွာရှိလွတ်လပ်သောနည်းပညာများကိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုရည်ရွယ်သည်။ XXI ရာစု၏ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၏လယ်ပြင်၌လူသားအမြင်အနေဖြင့်ဇာတိမြေ၏အစီအစဉ်တွင်။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဗဟိုအမေရိကအသိုင်းအဝိုင်း (SLCA) သည်ဘီလီဇ်၊ ဂွာတီမာလာ၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်၊ နီကာရာဂွာ၊ ကော့စတာရီကာနှင့်ပနားမားတို့တွင်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်လုပ်ဆောင်သောမတူညီသောအဖွဲ့များအတွက်အစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်မှု၊ ပူးပေါင်းခြင်း၊ ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ဆော့ဝဲလွတ်လပ်ခွင့်သည်အခမဲ့ဗဟုသုတများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများသို့ပြောင်းလဲမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
Linux အသုံးပြုသူအုပ်စုများ - Central America ဖြစ်သည်
GULNI: နီကာရာဂွာရှိ Linux Users Group
GULCR: ကော့စတာရီရှိ Linux Users Group
GUUGဂွာတီမာလာရှိ Unix အသုံးပြုသူများ
SVLinux: အယ်လ်ဆာဗေးဒေါမှ Linux Users Group
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖောင်ဒေးရှင်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲလ်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး၏မိခင်ဖြစ်ပြီး GNU စီမံကိန်းကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန်ရစ်ချတ်အမ်။ လက်ရှိတွင်၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသုံးပြုသူအား ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများလည်းအလားတူရည်မှန်းချက်ကိုမျှဝေပြီးဒေသတွင်းသို့မဟုတ်တိုက်ကြီးအဆင့်တွင်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမှုဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ဆော့ဝဲဖောင်ဒေးရှင်းဥရောပ, အ အခမဲ့ဆော့ဝဲဖောင်ဒေးရှင်းလက်တင်အမေရိက နှင့် အခမဲ့ Software ဖောင်ဒေးရှင်းမှအိန္ဒိယ.
ထိုဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများသည် GNU စီမံကိန်းကိုအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖောင်ဒေးရှင်းကဲ့သို့ထောက်ခံကြသည်။
၎င်းသည်ယူအက်စ်တွင်အခြေစိုက်။ အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆော့ဗ်ဝဲလွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုညှိနှိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းအားလုံးသည်သူတို့၏အချိန်ကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းကြသည်။
OFSET သည်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာပညာရေးစနစ်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်ကြားရေးကို ဦး တည်သည့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ OFSET သည်ပြင်သစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော်လည်းယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖော်ပြမထားသည့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်သက်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် / သို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုခုကိုသင်သိပါသလား။ မင်းကိုပို့ပေးပါ ထောက်ခံချက်.